देवः विकास बैकले चिपमा आधारित भिसा डेविट/एटिएम कार्ड प्रयोगमा ल्यायो
काठमाडौं, १७ बैशाख । देवः विकास बैक लिमिटेडका ग्राहक महानुभावहरुलाई अझ सुरक्षित, विश्वसनीय एवं भरपर्दो कारोबारका लागि चिपमा आधारित भिसा डेविट/एटिएम कार्ड प्रयोगमा ल्याइएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।...
सेयर कारोवार बढ्यो, सातामा पाँच अर्ब ६९ करोड ३७ लाखको सेयर कारोवार (तालिका–सहित)
काठमाडौं, १५ बैशाख । यो साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १५६ कम्पनीहरुको कारोबार भएको छ । जस अनुसार ४१८९८ कारोबारबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरका ८२ लाख चार हजार तीन सय ५० कित्ता सेय...
नेप्सेमा झिनो अंकले सुधार, कसले कमायो-कसले गुमायो ? (तालिका–सहित)
काठमाडौं, १४ बैशाख । साताको अन्तिम कारोवार दिन बिहिबार नेप्सेमा झिनो अंंकले सुधार आएको छ । आज नेप्से शुन्य दसमलव ३२ अंकले बढेर १६ सय ७० दसमलव ६२ अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ भने शुन्य दसमल...
राष्ट्र बैैंकले सात अर्बको बिकास ऋणपत्र मंगलबार
काठमाडौं, १४ बैशाख । आगामी मंगलबार पुन सात अर्ब रुपैयाँको बिकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैैंकले बोलकवोलको माध्यमद्धारा बिक्री गर्ने गरी नौ बर्षे अवधिको बिकास ऋणपत्र २०८३ जारी गर्न लागेको हो...
नेप्से निरन्तर ओरालोतर्फ उन्मुुख, ९५ करोड ५१ लाखको सेयर खरिद बिक्री (तालिका-सहित)
काठमाडौं, १३ बैशाख । केहीदिन अघिसम्म उच्च अंकले बढेको नेप्से लगातार घट्न थालेको छ । आज बुुधबार पनि नेप्से सुचक तथा कारोवार रकम दुुबै नै घटेको छ । नेप्से दुुई दसमलव आठ अंकले घटेर १६ सय ७० दसमलव ३० अ...
काठमाडौं, १२ बैशाख । प्रभुु बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्नको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष अनुुमती माग गरेकाछन । प्रभुुले दुुई अर्ब ३५ करोड २५ लाख ६० हजार आठ सय रुपैयाँको हकप्र...
बैकिङ कसुुरका घटना ह्वात्तै बढ्यो, ठगीमा संचालकदेखि कर्मचारीसम्मको संलग्नता यस्तो !
काठमाडौं, ११ बैशाख । बैकिङ कसुुरका घटना पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अनुसार यतिबेला ठगीका घटना निकैनै बढेको हो । ठगीमा बैंक तीन दर्जन बैंक स...
सेयर–बजार: ३५ अंकको उच्च बृद्धि पश्चात पुुन १७ सय अंकको नजिक (तालिका सहित)
काठमाडौ, १० बैशाख । साताको पहिलो कारोवार दिन आईतबार नेप्से निर्धारित समय भन्दा २५ मिनेट ढिला बन्द भएको छ । सामान्य अवस्थामा अपरान्ह तीन बजे कारोवार कक्ष बन्द हुने नेप्सेको आज केहीबेर सिस्टममा प्राब...